नेपाल आज | म काठमाडौंबाट चुनाव जितेर रेकर्ड राख्छु (भिडियोसहित)
अन्तरवार्ता राजनीति भिडियो
म काठमाडौंबाट चुनाव जितेर रेकर्ड राख्छु (भिडियोसहित)
मङ्गलबार, ०३ असोज २०७४ गते प्रकाशित - नेपाल आज (DR)
लालबाबु पण्डीत, नेकपा एमालेका चर्चित नेता तथा पूर्वमन्त्री हुन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हाल्दा पण्डीतले डिभी पिआर लिने सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सकिने कानुन बनाएर चर्चा कमाएको थिए । पछिल्लो समय भने नेता पण्डीत अरु नै कारणले चर्चित छन् । उनको चर्चाको विषय भने उनी तराईका मानिस भए पनि पहाड वा काठमाडौंबाट निर्वाचन लड्न भन्ने छ । प्रस्तुत छ नेता पण्डीतसँग भएको कुराकानीको सारः
चुनावमय छ मुलुक । तपाईको तयारी के छ ?
म जहिले पनि चुनाव लड्ने भनेको मोरङबाट हो । तर एउटा पार्टीको कार्यकर्ता भएपछि कुन क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने भन्ने विषय पार्टीको हातमा हुन्छ । मलाई पार्टीले जहाँबाट चुनाव लड्न भन्छ म त्यहीँबाट लड्छु । तर यसपटक एक किशिमको अर्को चर्चा पनि छ । जस्तो कि पहाडी मूलका मानिस तराईबाट चुनाव लड्छन् जित्छन् पनि । तर तराईको मानिस पहाड र उपत्यकाबाट चुनाव लड्दा जित्लान कि नजित्लान ? एउटा यादव थरको मान्छेलाई काठमाडौंले निर्वाचित गर्छ कि गर्दैन ? यो विषय उठिरहेको छ ।
काठमाडौंबाट चुनाव जित्ने पहिलो मधेसी नेता बन्न चाहनु हुन्छ ?
पहिलो कुरा त मलाई पार्टीले उठ्न भन्नु पर्यो । स्थानीय कमिटीले पनि आउनु भन्नु पर्यो अनि मात्रै हुन्छ । निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो । निर्णयमा जाँदा मैले धेरै पहिला भनेको थिएँ कि म आँट गर्छु । टेस्ट पनि हुन्छ । परिणाम सुखद ल्याएर देशलाई सन्देश पनि दिन चाहन्छु । म तराईमा मात्रै होइन पहाडमा पनि सहानुभूति र समर्थन पाउँछु भन्नेमा विश्वास छ । मौका पाएँ भने म रेकर्ड ब्रेक गर्छु भन्ने मलाई विश्वास छ ।
अहिले कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनले एमालेलाई गाह्रो छैन ?
एमाले तालमेल गर्दैन भन्ने पक्षमा हामी छैनौं । तर स्थानीय तहमा हामीले तालमेल गर्दा घाटा मात्रै हो । अर्को तिर सरकार टिकाउन मन्त्रीको संख्या थप्ने, कुनै मूल्य मान्यता पनि नहुने । आफ्नो इच्छा भए पुग्यो भन्ने छ । नेकपा एमालेसँग माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन भनेर स्वीकार गर्न सक्दैन । त्यही भएर उनीहरु सहयोगी शक्ति खोजिरहेका छन् । यसबाट एमालेलाई घाटा छैन । अरु सबै मिलेर पनि एमाले एक्लै लड्न सक्छ । तर नेपाली कांग्रेस आफूलाई ठूलो पार्टी हुँ भन्ने अहंकार बोकेको छ । यसकारण कांग्रेसले आफ्नो सिट काटेर माओवादी वा राजपालाई दिनु पर्ने हुन सक्छ ।
भरतपुरमा कांग्रेसले त दियो त हैन ?
भरतपुरमा एमालेले नै जितेको हो । त्यहा लुटेर जितेको हो । राज्यको सबै शक्तिको दुरुपयोग गरेर जितेको हो नी ।
भरतपुरमा देवी ज्ञवालीले जितेको भए जनताको अभिमतले जितियो भन्नु हुन्थ्यो होला, हारेपछि लुटतन्त्र भन्न मिल्छ ?
भरतपुर र त्यसको वरपर छ अर्ब भन्दा बढी बजेट खर्च गरिएको छ । त्यो पनि चुनावलाई प्रभाव पार्न । यो त दृश्यमा देखिएको कुरा हो । मैले लुट किनभनेको भने जनताले दिएको मत पत्र च्यात्नु भनेको लुट हैन । लुटेर फेरि चुनाव गराएर जितेको हो । दोस्रो पटकको निर्वाचन त फेयर भएको छैन । गठबन्धन सरकार आफू चलाउने, प्रतिपक्षीको उम्मेदवारले जित्न लागेको देखेपछि मतपत्र च्यातियो ।
प्रमले भारतमा बोलेको, गरेको कामको विरोध किन ?
उहाँको बारेमा धेरै भन्नु छैन । मूलत उहाँले संविधान संशोधनका बारेमा बोल्न नहुने कुरा थियो । अन्य देशका प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो बोलेको भए स्वदेश फर्किदासम्म विदेशमै हुँदा बर्खास्त भइसक्थे । कतिपय देशमा संसदमा प्रस्ताव फेल हुँदा राजीनामा दिने चलन छ । हामीले राजीनामा माग गरेका छैन । संसदले पास गरेको विषयका आधारमा रहेर देश अगाडि बढ्छ । संसदले पास गरेको विषय छाडेर भारतमा अरु कुरा बोल्ने ? संसदले गरेको फैसलाविरुद्ध विदेशी प्रधानमन्त्रीको अगाडि संसदको निर्णयको विरुद्ध संविधान संशोधन हुनेछ भनेर बोल्ने हो ? यो संसदको अपमान होइन ? यो जनताको अपमान होइन ? संसदले गरेको निर्णय उहाँले बोक्नु पर्ने हो कि होइन ? सरकार र सत्ता पक्षले बोक्नु पर्छ । नत्र के को संसद, केको सार्वभौम जनता ? मलाइ त लाग्छ उहाँले पहिलो संविधान संशोधनको बाचा गर्नुभएको थियो ।
त्यो पूरा नभएपछि उहाँले म बाचा फेरि पनि पूरा गरेर देखाउँछु भन्नु भएको हो । यस्तो कुरामा हामीले बोलेका हौं । नेपाल र नेपालीको अपमान हुने कुरा प्रधानमन्त्री देउवाले बोलेका कारण हामीले विरोध गरेका हौं । देउवाको कर्मअनुशार त हामीले कम बोलेका हौं । यो चुनावी वर्ष नभएको भए उहाँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहनु हुने थिएन । हामी संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा छौं । चुनाव गर्नु पर्ने छ । यसकारण हामीले संयमता अपनाएका हौं ।
कोशी उच्च बाँधबारे पनि प्रधानमन्त्रीले समझदारी गर्नुभयो नी, के भन्नु हुन्छ ?
कोशी उच्च बाँधको अध्ययन पूरा भएको छैन । हाम्रो देशमा संक्रमणकाल छ । अहिले धेरे बोल्न मिलेन । पूरा अध्ययन भएपछि मात्रै भन्न सक्छु । अहिले प्रधानमन्त्रीले जे गरेर आउनु भएको छ त्यसमा अहिले नै नगर्नुभएको भए बेस हुन्थ्यो । भारतले विभिन्न योजना ओगटने, काम नगर्ने, अल्झाउने प्रवृत्ति छ । पञ्चेश्वर धेरै प्रोजेक्छ अल्झिन सक्छ । यसमा राजनीतिक सहमति निकालेर काम गर्नु पर्छ ।
पञ्चेश्वरको कुरा गर्दा महाकाली सन्धि पनि जोडिन्छ । महाकाली सन्धी एमालेले पनि पास गरेकै हो । त्यो सन्धीलाई राष्ट्रघाती भन्ने गरिन्छ । एमालेका नेताहरुले पनि त्यही भनेका थिए । अहिले चाहीँ एमाले अरुलाई राष्ट्रघातीमात्रै देख्छ, आफूलाई चाहिँ राष्ट्रवादी मात्रै मान्छ किन होला ?
जुन बेला सन्धी भयो, त्यो सन्धी मूख्य रुपमा गिरिजाप्रसादले गरेका हुन् । हामीले राष्ट्रघात नै भनेको हो । काम चाहिँ भइसकेको कारणले नेपालले क्षतिपूर्ति पाउने गरी नयाँ पञ्चेश्वर तयार गरियो । राष्ट्रघात नहोस भनेर गरिएको हो । पछि नेपाललाई फाइदा हुने भयो भन्ने थाहा भएपछि भारतले रोकेको हो । त्यो बेला नै छ महिनामा डिपिआर तयार पार्ने कुरा थियो । भारतले स्पष्ट दृष्टिकोण राखेको छैन । नेपाललाई अल्झाएर राख्ने मात्रै गर्ने गरिरहेका छन् । उनहरुलाई केही फरक पर्दैन । तर हामीलाई जति ढिलो भयो त्यही घाटा हुन्छ । एक्लै सकिने स्थितिमा एक्लै नत्र संयुक्त रुपमा भए पनि बनाउनु पर्छ । अहिलेसम्म नेपाललाई फाइदा नहुने गरी भारतले बनाउँदै आएको छ । कोशी, गण्डक सबै तिर त्यस्तै छ । हामी त्यो चाहँदैनौं । नयाँ जति योजना बन्छ, त्यसमा पनि लगानी र हिस्सा माग्नु पर्छ भन्ने हो ।
यो वर्ष चुनावी वर्ष, चुनावी सरकार भए पनि जनजीवीकासँग सम्बन्धित पनि हुन्छ सरकार । अहिलेको सरकारले जनहितमा कति काम गरेको जस्तो लाग्छ ?
अहिले काम भन्दा पनि कुर्सी टिकाउने काम गरिएको छ । सानो मन्त्रीमण्डल भए पनि हुनेमा ठूलो मन्त्रीमण्डल बनाइएको छ । सुविधा थप गरिएको छ । यहि बेला हो रमाउने भनेर हिँडकोे जस्तो छ । अब निर्वाचन पछि थ्रेस होल्ड लाग्छ । अब च्याँखे दल र नेताको दिन समाप्त भए । यहि भएर अहिलेको बेलामा केही गरिहाल्यौं । केही कमाउँ भनेर यसो गरिएको हो । जनतामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । जनताले राम्रो सेवा पाएका छैनन् ।
Lalbabu Pandit yemale